Firy ny lahatsoratra bilaogy? | Martech Zone
Firy ny lahatsoratra bilaogy?
Wednesday, May 28, 2008 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Fanontaniana mahaliana no napetraka tamiko androany ary te hizara aminareo olon-kafa aho mba hahalalanareo ny hevitrareo. Misy fomba mora hilazana hoe firy ny bilaogy mandefa bilaogin'ny olona iray?
miaraka WordPress, tsotra be (angamba tsotra loatra). Ny famonosana ny paositra tsirairay dia div miaraka amin'ny Post ID. Ny ID ID dia mitovy dika amin'ny isan'ny paositra. Misaotra autonumber! :). Somary gaga ihany aho fa tsy izany obfuscated kely.
Mazava ho azy fa tsy mandinika ireo lahatsoratra nofafanao ity fa tombatombana akaiky ihany.
Miaraka amin'ny fampiharana bilaogy nampiantrano, toa Bilaogera, tsy azo atao mihitsy izany satria ny POSTID dia voatendry manerana ny bilaogy rehetra:
Iray amin'ireo fomba mora kokoa ampiasako ny fanaovana fikarohana amin'ny tranokala Google fotsiny. Azonao atao ny mamaky ny taona sy ny isan'ny lahatsoratra tsy manam-paharoa mandritra ny taona:
Miala tsiny amin'i Paul Misy (mahafinaritra be Podcast an'ny marketing!) mialoha. Azoko atao ny milaza amin'ny fikarohana, amin'ny fampiasana ny taona, fa manana lahatsoratra 125 i Paul. Nanana 50 izy tamin'ny herintaona talohan'izay ary 32 hatreto tamin'ny 2008. Karazana fikafika, huh?
Manana fomba tsotra ahafahanao milaza ny isan'ny lahatsoratra amin'ny bilaogy manerana ireo sehatra hafa?
Tags: clipsyncfizarana prsyncronousFikendrena ara-teknolojiawordpress ahoana no
Tsy ampy ny fanaovana bilaogy, “Press the Flesh”!
Fotoana angamba hieritreretana ny paikadinao rehefa…
May 29, 2008 amin'ny 6: 54 AM
Azonao atao foana ny mandefa baiko Lynx amin'ny alàlan'ny fitaovana fibaikoana mba hamoronana ireo rohy rehetra hita ary avy eo atsofohy amin'ny wc -l.
Kinda dia toy ny mampiasa marotoa hanosehana ankihiben-tànana. 🙂
Ny vazivazy nataoko maraina alohan'ny hatory tao amin'ny keyboard-ko, Barbara
May 29, 2008 amin'ny 7: 25 AM
Lahatsoratra tsara sy fanontaniana lehibe Doug
Toa aleoko mandeha cranking amin'ny bilaogiko!
Misaotra tamin'ny fanonona
May 29, 2008 amin'ny 7: 29 AM
Mila bilaogy miorina amin'ny bilaogera tsara aho ohatra ary ny anao no tao an-tsaina.
Tsy momba ny habetsahana izany - miharihary ny kalitaon'ny hafatrao sy ny fotoana laninao hanovana sy hametrahana azy ireo!
May 29, 2008 amin'ny 8: 09 AM
Na - ary tsapako fa tsy manana vahaolana tsara toa ny karoka Google sy ny baiko Lynx manokana aho - azonao jerena fotsiny ireo arisiva izay mampiseho ny isan'ny lahatsoratra isam-bolana sy isam-bolana ary manangona azy ireo amin'ny pensilihazo sy taratasy. 😀
May 29, 2008 ao amin'ny 7: 52 PM
Midira Douglas Karr: Cyber-Stalker!
Fanamarihana fotsiny, misy antony maro MySQL mety mandingana autonumber ka ny isa laharana dia mety indrindra, fa tsy isa marina. FYI fotsiny.
May 29, 2008 ao amin'ny 10: 11 PM
Tsara tratra Doug, tsy fantatro fa ho hitanao amin'ity fomba ity - tsotra ihany koa!
Raha manafina ireo rohy mankany amin'ny arisiva ny bilaogy ary te hizaha toetra raha toa ka bilaogy vaovao na tsia (na bilaogy spam fotsiny izay misy lahatsoratra vitsivitsy), dia matetika no tsindrio ny bokotra RSS ao amin'ny tranokala firefox hijerena ny fahana . Satria ny default ho an'ireo lahatsoratra RSS RSS dia 10 (ary matetika avela tsy voakitika), ny lahatsoratra kely noho io eo amin'ny feed dia matetika no hilaza amiko fa bilaogy vaovao be io (ary maro ny bilaogy spam no mbola manana ny 'hello world' ao ho voalohany. lahatsoratra).
Untech tanteraka fantatro. Ilaina kokoa ireo hevitra etsy ambony!